Siyaasiyiin Ku Howlan Kala Qeybinta Gobolka Hiiraan. – SBC
Siyaasiyiin Ku Howlan Kala Qeybinta Gobolka Hiiraan.
Ibraahim Xabeeb Nuur
Siyaasiyiin iyo Masuuliyiin hore Oo Ka Soo Jeedda Gobolka Hiiraan ayaa Ku Howlan Sidii Gobolka Hiiraan Looga Dhigi Lahaa Labo Gobol.
Waxa uu sheegay in wejiga hore beelo badan ilaa hadda lagu heshiisiiyay shirweynaha ka socda magaalada Beledweyne oo ay leeyihiin beelaha dega gobolka Hiiraan kaas oo ujeedka laga leeyahay ay tahay in marka hore nabad laga dhex dhaliyo beelaha ay colaaduhu dhexmareen mudadii dawlad la’aanta iyo in wejiga labaad shirkaasi looga arrinsanayo mustaqbalka iyo aaya ka talinta gobolka Hiiraan.
“Shirka waa labo waji, marka ugu horeysa wajiga koowaad waxaa ilaa iyo hadda lagu heshiiyay illaa sideed beelood, waxaa rajeyneynaa in kuwa harsan ee ah beelihii dagaalamay xilliyadii dagaaladii sokeeye iyana la heshiisiiyo”ayuu yiri Ibraahim Xabeeb Nuur oo u waramayay Idaacada BBC-da laanteeda Afka Soomaalida.
Mar la weydiiyay in shirka beelo qaar oo dega Hiiraan ka maqan yihiin, ayuu tilmaamay in saddex beelood aanay si buuxda uga soo qeyb gelin shirka, balse ay socdaan dadaalo ku aadan sidii beelaha maqan shirka ugu soo biirin lahaayeen.
Ibraahim Xabeeb ayaa sheegay in Gobolka Hiiraan uu ka mid ahaa lixdii Gobol ee lagu aas aasay Koofurta Soomaaliya sanadkii 1948 xilligii Talyaaniga, isagoo tilmaamay in kadib lixdankii xornimada Soomaaliya ay ka mid aheyd 8-dii Gobol ee dalka ka jirtay.
“Gobolka Hiiraan ma helin xuquuqdii ama dhaxalkii uu lahaa, sida Gobolada kale loo qeybiyay, tusaale ahaan Gobolka Banaadir saddex ayaa loo qeybiyay, sida Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose iyo Banaadir, hadana waxaa rabnaa in Hiiraan si la mid ah Goboladii la kala qeybiyay oo kale in Labo gobol laga dhigo”ayuu yiri Ibraahim Xabeeb.
Mr Xabeeb ayaa sheegay in Hiiraan ay wax ku darsan karto Shabeellaha Dhexe, haddii ay labo gobol tahay, hadii taas dhicina aysan marnaba ogolaan doonin, isla markaana aysan reer Hiiraan aqbali doonin.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in Gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe loo sameynayo Maamul, waxaana dad badan ay saadaalinayaan caqabadaha iyo khilaafka ka jira Maamul u sameynta Gobollada Dhexe ay ka darnaan doonto tan Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo aan wali la guda gelin.